हामी प्रवासी पनि बाबुरामको अभियानमा लामबद्ध छौं । | OnlineChautari.com
हामी प्रवासी पनि बाबुरामको अभियानमा लामबद्ध छौं ।
October 6, 2015 | 1:24 pm
संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संबिधान बनेको छ । नेपाली जनताले आफ्ना निर्वाचित प्रतिनिधिमार्फत आफ्नो संविधान निर्माण गरेका छन् । यो नेपालको इतिहासकै एउटा अत्यन्त महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक घटना हो । यससँगै आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत संविधान लेख्ने दशकौ देखि देखेको नेपाली जनताको सपना पूरा भएको छ । साथै संबिधान निर्माणपछि राजनैतिक क्रान्तिको एउटा चरण पुरा भएको छ भने अब आर्थिक विकासको चरणमा मुलुक प्रवेश गरेको छ । तर यस्तै चर्चा चलिरहँदा तराई–मधेस लगायत देशका विभिन्न क्षेत्रमा चलेको आन्दोलनले गर्दा ‘खोला त¥यो लौरो बिस्र्याे’ जस्तो महशुस हुन थालेको छ ।
लेखकः दिप दिपु
विधि र प्रकृयाको हिसाबले हेर्दा नेपाली इतिहासमा नै पहिलो पटक नेपाली जनताका प्रतिनिधिहरुले बनाएको संविधान हो । त्यस हिसाबले यो संविधान अहिलेसम्म कै सबैभन्दा बढी लोकतान्त्रिक संविधान हो । तर नेपालको आर्थिक मेरुदण्ड भनेर चिनिने तराई÷मधेश अहिलेको समयमा एकदमै आक्रोसित बनेको छ र आजको दिनमा कुनै पनि नेपाली मनहरु पिडामा नछट्पटाएको सायद कमै होलान् । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक परिवर्तन संस्थागत गरी, सर्वमान्य संबिधान हुने गरी मात्र मुलुक आर्थिक परिवर्तनको चरणमा प्रवेश गर्नु नै सही निर्णय हुन सक्छ र बनेको संविधानमा सबैलाई समान हक अधिकार प्रदान गरिनुपर्दछ ।
जनसंख्याको ५० प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली जनता मधेसमा बसोबास गर्छन् । नयाँ संविधानमा आफ्नो माग पुरा नभएको भन्दै सम्पूर्ण तराई÷मधेस विगत लामो समयदेखि आन्दोलित छ । उनीहरुको मागलाई पनि ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्नु आवश्यक हुन्छ । नेपाल हाम्रो देश हो र यो देशमा बस्ने हामी सबै नेपाली । यहाँ बस्ने नेपालीहरुको जात, धर्म, वर्ग छुट्टाछुटै होला तर हामी सबैको मन त एउटै छ, त्यो हो नेपाली मन । के तराई, के पहाड, के मधेस सबैको एउटै साझा घर हो जसलाई दुखे नि अर्कोको आशु आउँछ । मधेश पनि हाम्रो देश नेपालको अमूल्य सम्पत्ति हो र त्यहाँ बस्ने मधेसी पनि नेपाली हुन् भन्ने कुरा हामीले कहिल्यै पनि भुल्न हुन्न ।
अहिलेको स्थितिमा नेताहरुले सबै जनतालाई एक धारमा राखेर विकास र प्रगतिको सूत्रमा अघि बढ्नु आवश्यक छ । जनताको माग र समस्या घरको कुनामा लुकेर होइन जनताको माझमा गएर आमने÷सामने बसेर छलफल गरेपछि बल्ल पत्ता लगाउन सकिन्छ । थरथर खुट्टा कमाउँदै संसद भवनमा बसेर देश उँभो लाग्दैन । कुन ठाउँमा के समस्या छ र त्यसको समाधान के हुन सक्छ भनेर समाधान गर्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ जुन अहिले पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले गरिरहेका छन् ।
मधेस निकै आक्रोसित बनेको बेलामा मधेस गएर उनीहरुको समस्याको हल खोज्न बढाएको बाबुरामको पाइला स¥हानीय छ । गालि गर्नु, एक अर्कालाई आरोप लगाउनु, झगडा गर्नु, प्रहरी लगाएर दमन गर्नु सहज हुन्छ तर जे पर्ला सोही टर्ला भन्दै आफ्नो देशलाई राम्रो हुन्छ भने ज्यानको माया छैन भनेर अगाडि बढ्ने मानिस नै देशको सच्चा राजनेता हुन सक्छ । जुन अहिलेको समयमा मैले डा बाबुराम भट्टराईमा देखिरहेको छु । काठमाडौंको एउटा कोठामा थुनिएर गफ हाक्ने नेताहरु भन्दा उनमा वेग्लै किसिमको साहस छ र उनी एक बौद्धिक ब्यक्तित्व भएका असल मानिस हुन् भन्न कुनै आपत्ती छैन । हिजोको दिनमा पनि आफ्नो सिद्धान्तमा खरो उत्रिएका थिए र यो क्रम सधैँ जारी रहनेछ भन्ने मेरो पुरा विश्वास छ । मैले उनलाई सधैँ देशको एकमात्र सर्वहारा वर्गको नेताको रुपमा लिन्छु ।
हिजोको दिनमा पदमा हुँदा पनि उनले गरेको कामहरु राम्रा थिए ।
अहिले उनी माथि लगाइएको आरोप सा¥है नै चित्त नबुझ्ने कुरा हो । मैले त्यो कुरामा विल्कुलै सहमती जनाउन सकिरहेको छैन । उनको जस्तो उच्च विचार भएका मानिस हाम्रो देशमा सायदै होलान । हुन त राम्रो गर्छु भन्ने मान्छेलाई कसले पो अगाडी बढ्न दिन्छ र ? हिजो उनले राम्रो काम गर्दा जय जयकार गर्ने तिनै नेपाली जनता हुन् जसले आज अनेक आरोप प्रत्यारोप लगाइरहेका छन् । के डा. बाबुराम भट्टराई गलत हो भन्ने कुरा हाम्रो मनको आवाज हो त ? या अरुले रोपेको बिषको फल हो ? हुन त उनलाई आजसम्म कसैले बुझ्न सकेको छैन उनी भारतीय दलाल हुन् या एक सच्चा राजनेता हुन् भन्ने कुरा विस्तारै समयले बताउने छ ।
अरुको बँुई चढेको मान्छेको टाउको अलि माथि देखिनु कुनै नौलो कुरा होइन । तर सतहमा बसेर कसले बोकिरहेको छ भन्ने कुरा जगजाहेर छ । हिजोको दिनमा साइकल चढेर देश हाँक्छु भन्नेहरु दुई दिन नहुँदै भावविह्ल हुँदै अरुको शरण परेको देख्नु नपरोस् । मान्छे मरेपछि घाटसम्म पु¥याउनलाई त छिमेकीको काध चाहिन्छ भने एउटा देश चलाउनलाई एक्लै गर्छु भनेर एकलकाँटे बन्नु मुर्खता बाहेक अरु केहि हुनै सक्दैन ।
रह्यो देशलाई बेच्ने कुरा हामी आँफै विचार गरौ न हामीलाई हाम्रो जग्गाको सानो एक टुक्रा बेच्नुप¥यो भने कति संघर्ष गर्नुपर्छ । कुनै नियम पालना नगरी हामीले आफ्नो खुशीले त आफ्नो सम्पत्ति बेच्न असफल हुन्छौ भने, के उनले देश बेच्न सक्लान त ?
हात्ती लम्किदै गर्छ कुकुर भुक्दै गर्छ । डा. बाबुराम भट्टराई खुल्ला हृदय भएका नेता हुन् उनले जे गर्छन त्यहि बोल्छन् । भारतसँग उनले जस्तो व्यबहार गर्छन जनता सामुन्ने त्यस्तै बोल्छन अरु नेता जस्तो गोप्य कोठामा चाकडी बजाउने र जनताको अगाडी कुर्लिएर विरोध गर्न जान्दैनन् । त्यसैले होला उनलाई भारतीय एजेन्ट भन्दै गाली÷गलौच गर्नेको भिड बढेको । तर सत्य त यो हो कि उनी त्यो मात्र भविष्वाणी गर्छन जुन उनको विश्लेषणले देख्छन् । अरु हाम्रा देशका शोषकहरुले जस्तो जे जसरी फाइदा हुन्छ त्यही गर्दैनन् ।
आजकल त मलाई नेपाली कांग्रेसका नेता गणेशमानले भनेको ‘नेपाली जनता भेडा बाख्रा हुन्’ भन्ने कुरा सही हो कि भन्ने लाग्न थालेको छ । जसले चिप्लो घस्यो, मिठो बोल्यो त्यसैको पछि लाग्ने । कसको विचार कस्तो छ र कसले के गरिरहेको छ विचार नै नगर्ने । एउटा अगाडी बढ्यो भने त्यसको पछि लाग्ने । सबै नेताहरु भारतलाई गाली गरेर सस्तो लोकप्रियता बढाउने होड्बाजीमा लागिरहेको बेला आफ्नो जीवनभरीको राजनैतिक उपलब्धीलाई नै दाउमा राखेर आज एउटा सच्चा देशभक्त, राजनेता आफ्नो दाजुभाइ र मधेसी नेपाली जनताको गाउँ पसेर आफ्नो घरको, आफ्नो देशमा भइरहेको झगडा मिलाउन पसेकोमा म एकदमै खुशी भएको छु । उनले भावनात्मक रुपमा विछिप्त तराई–मधेस र पहाडबीच एकताको भाव पैदा गर्न खोजेका छन् । मधेसी र पहाडीबीचको दूरि कम गर्न खोजेका छन् । आफ्नो देश प्रगतिको दिशातर्फÞ लम्किन्छ र देश बन्छ भने जसले अपमान गरे पनि गाली गरेपनि कसैको पर्वाहा नगरी आफ्नो देशको समस्यामा हामी आँफैले अघि बढ्नुपर्छ र समस्याको हल गर्नुपर्छ भनेर लागेका छन् । सबै जाति, भाषा, क्षेत्र र समुदायका जनतालाई विश्वासमा लिएर देशलाई एकतावद्ध गर्नुपर्छ भन्ने नारा अगाडि बढाएकोमा म उनलाई हृदयबाट नै नमन गर्न चाहन्छु ।
जसले आज उसलाई राष्ट्रघाती, कसैको एजेन्ट, दलाल आदि इत्यादी भनिरहेका छन् त्यो उनीहरुको मन हैन मुख बोलिरहेको छ । एक न एक दिन सबै नेपालीहरु उनको पछि लाग्न बाध्य हुने नै छन् । जसले आफ्नो राष्ट्रको हितका कुरा गर्दै अगाडि बढेको छ, उसैको बदनाम भएको देख्दा मनमा कता–कता बिजेको भान भइरहेको छ । म आशावादी छु एक दिन सबै नेपाली जनताले यो कुरा बुझ्नेछन् र उनले सुरुगरेको आर्थिक विकास र सम्मृद्धिको बाटोमा लामवद्ध हुनेछन् । डा. भट्टराईलाई अग्रिम शुभकामना !